25-jir dhaqaale ka sameeya sunta Dib-qalooca | Radio Himilo
Home / Dhaqaale / 25-jir dhaqaale ka sameeya sunta Dib-qalooca
Posted by: Sadia Nour December 8, 2020
Himilo – Sheekada da’ yarkan Masaariga ah waxey dib u laabaneysaa dhow sanno kahor markaas oo uu billaabay inuu duurka kasoo ugaarsado Dib Qalooca, si uu suntiisa uga sameeyo dhaqaale.
Hadda waa 25-jir Mohamed Hamdy Boshta waana milkiilaha shirkad soo saarta suntan Dib-qalaaca. Mashruuciisa waxa uu hooy u yahay 80,000 oo Dib-qalooc, kuwaas oo laga kala keenay beero ku firfirsan Masar iyo Masas oo qudhoodu suntan laga rabo.
Iyada oo la adeegsanayo kaaha shucaaca leh ee UV light, waxaa Dib-qalooca uu soo saaraa suntiisa, taas oo halkeedii garaam laga soo saari karo 20-kun illaa 50-kun oo dhibcood oo ah dawada loo adeegsado qaniinyada halaqyada.
Halkii garaam ee suntaasi waxaa lagu iibiyaa $10,000, waxa uuna Boshta u iib geeyaa dalalka Yurub iyo Mareykanka, kuwaas oo kasoo saara dawada lagu dabiibo qaniinyada halaqyada iyo kuwo kale oo midood lagula tacaalo Dhiig-karka.
Previous: UK oo dadkeeda ka tallaaleysa Covid-19
Next: 26-jir wiilkii ay haasaawe-wadaagga ahaayeen ka gudbisay dacwad